Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay in la soo dhiso maamulka cusub ee Afghanistan | Star FM
Home Caalamka Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay in la soo dhiso...
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay in la soo dhiso maamulka cusub ee Afghanistan
Golaha amniga ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa soo jeediyay in la billaabo wada hadallo lagu soo dhisaya dowladda cusub ee wadanka Afghanistan.
Xubnaha golahan ayaa sidoo kale ku taliyay in la soo afjaro dagaallada iyo tacaddiga.
Tani ayaa timid ka dib markii xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ka digay in kooxda Taalibaan ay ka tallaabsanayso xuquuqul aadanaha iyadoo tacaddi u gaysanayso haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Guterres ayaa 15-ka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday inay sameyaan qaab kasta oo lagu caburinayo waxa uu ku tilmaamay khatarta argagixiso ee caalamka kaga imaanaysa dhanka Afghanistan.
Previous articleEedeysane ka dambeeya dilka afar qof oo gacanta lagu dhigay